Alahady 15 Novambra 2020 – FJKM
2 MPANJAKA 19.14-19
Jehovah irery ny Andriamanitra Mpamonjy mahatoky
Sankeriba fahavalo efa zatra misetrasetra , mpanjakan’i Asyria dia te- hanitatra hatrany ny fandravana ataony . Ireo no atrehan’i Hezekia mpanjaka araka ny voatantara eto . Ny vavaka izay fitaovana mahery vaika noho ny daroka sy ny baomba no indro niantsoany vonjy tamin’ Andriamanitra . Tamin’ny finoana miezinezina no nilazany fa :
1-Tokana Andriamanitra ary Mpanjakan’ny mpanjaka Izy (15a-19b)
Nambaran’i Hezekia tamin’ny tonom-bavaka nasandrany fa tokana Andriamanitra ,tsy misy tahaka Azy ,ary tsy misy izay azo ampitahaina Aminy .Tsy azo afangaroharo amin’ny sampy ny Tompo Andriamanitra . Ivelan’i Jehovah Andriamanitra dia tsy azo ekena ho Andriamanitra ary ankoatran’i Jehovah dia tsy tokony ivavahana . Andriamanitry ny fanjakana rehetra Izy ,ka afaka manao izay tiany hatao. Tsy manadino ny olony Izy fa azon’izy ireo iandrandrana famonjena satria mpamonjy mahatoky Izy .
2-Andriamanitra velona sy be voninahitra Izy (and 15b-16)
Velona Andriamanitra satria afaka miasa amin’ny fotoana rehetra . Miasa amin’ny maha-Mpahary Azy Izy ary mitamberina ao an-tsain’i Hezekia izany tao anatin’ny tonombavaka nataony ka nilazany fa na ireto olona manohitra sy manao tsinotsinona an’ Andriamanitra ireto aza dia asan’ny tànany ka azony fehezina . Velona Izy ka mihaino ny fitarainan’ny mpanompony , mijery sy mahita ny zava-mihatra amin’ny fireneny sy ny vahoakany manontolo .
Ahoana ny fomba hanehoanao eo amin’ny fiainanao ka haharesy lahatra ny hafa ihany ihany ka fa Jehovah no Mpamonjy anao ?
Alakamisy 26 Novamb 2020.
Talata 24 Novambra 2020
Alatsinainy 23 Novamb 2020.
Sabotsy 21 Novambra 2020.
Zoma 20 Novambra 2020
Alakamisy 19 Novamb 2020.
Alarobia 18 Novambra 2020
Talata 17 Novamb 2020